ABS High Gloss Edge Banding - China ABS High Gloss Edge Banding Umphakeli, Factory -HengSu Edging
Ikhaya » Imikhiqizo » I-Edge Banding » I-ABS Edge Banding
I-ABS (acrylonitrile butadiene styrene) kuyinto umthelela ukumelana, athutha futhi thermally ukuzivuselela, high quality Thermoplastic okuyinto Isizalo umsindo. Sekuyiminyaka engaphezu kweminyaka engu-20 manje, lokhu plastic chlorine-free has bee esetshenziswa ngempumelelo embonini ifenisha. Kuyinto isicelo oluvelele, ukucubungula kanye nokulahlwa izici, ngokukhethekile, ABS anomthelela negalelo elikhulu emakethe ifenisha yokukhiqiza.
Imikhiqizo ye-ABS yokumelana nokuguga okukhulu, ukumelana nesimo sezulu, ukuzinza okukhulu ngosayizi, ukumelana nomthelela omuhle, ukusebenzelana kwemvelo, akukho nsimbi esindayo neyingozi. for ifenisha yezingane.
Uchungechunge lwe-ABS lisebenzisa ikhwalithi ye-ABS eluhlaza kakhulu, lunokukhanya okukhulu nokuzinza nokukhetha okuningi kombala.